Alia Bhatt oo ka aamusi weesay dagaalka Kangana ku heyso una jawaab celisay – Filimside.net
Alia Bhatt oo ka aamusi weesay dagaalka Kangana ku heyso una jawaab celisay
Atirishada Kangana Ranaut waqti wacan ayay bartanka kaga jirtaa madaama filimkeeda Manikarnika guul gaaray sidoo kalena doorkeeda hogaaminta aad loogu amaanay balse xidigtan markale ayay muran dhexda ka gashay kadib markii dagaal afka ay ku qaaday Alia Bhatt.
Kangana aaa Alia ku eedeesay inay labo wajiile tahay sidoo kalena filimkeena Manikarnika garab istaagi weesay madaama iyada xiligii Alia filimkeedii Raazi masraxa ku cusba amaantay una dheereed inay daawatay.
Alia eedeynta Kangana dhaliil ayay u aragtay weyna aqbashay qaladkeeda sidoo kalena raali galin ayay hawada Kangana u marisay waxayna balan qaaday inay filimka Manikarnika daawan doonto.
Balse Kangana Ranaut kuma qancin jawaab celinta Alia Bhatt waxayna ku tilmaantay cunug yar oo aan go’aan laheyn sidoo kalena filim sameeye Karan Johar gabadhan gacanta ku haayo oo aysan xur ahayn go’aan ahaan iyo la fal galida dadka Bollywood-ka kala tirsan!
Alia Bhatt meel xun ayaa laga taabtay waana la bahdilay sidaa darteed xili ay filimkeeda Gully Boy xayeysiin u sameeneesay ayay arinkan ka hadashay waxayna tiri “Waxaan jeclaan lahaa Kangana si shaqsi ahaan inaan ula kalmo haddii ay dhibaato gaar ah iga tabaneyso mana doonayo saxaafada inaan jawaab arimahan ku aadan siiyo. Run ahaantii sidaan horey u dhahay Kangana waan ka helaa qaab jiliinkeeda iyo sida ay u doorato doorarka tayada wanaagsan.”
“Kangana waa qof hadal badan midaasna waan ku jeclahay madaama aysan waxba la gambanin. Haddii aan wax u dhiman si aan ku tala gal ahayn midaas ma ogi. Sida caadiga ahna aniga qofna si ku tala gal ah waxba uguma dhimo mana laga yaabo qof aan isku xirfad nahay inaan ku xad gudbo.”
Waxaan sugnaa jawaab celinta dhanka Kangana ka imaan doonto iyo haddii sheekadan dagaalka afka ku saleesan iska soo idlaan doonto.
Waxaa Aqrisay 705